Netrunner 2019.01 tonga miaraka amin'ny webapps sy vaovao farany | Avy amin'ny Linux
Netrunner 2019.01 tonga miaraka amin'ny webapps sy fanavaozana bebe kokoa
Ny orinasa Blue Systems, izay manome famatsiam-bola ho an'ny fampandrosoana KWin sy Kubuntu, dia namoaka famoahana vaovao ny fizarana Linux Netrunner 2019.01, izay omena miaraka amin'ny tontolon'ny birao KDE.
Ireo fanontana natolotra dia samy hafa amin'ny fizarana Netrunner Rolling sy Core novolavolain'ny orinasa iray ihany izay mampiasa ny fomba mahazatra amin'ny fananganana fivoriambe sy ny fonosana Debian Testing base, tsy mampiasa ny maodely fanavaozana ny Arch / Kubuntu.
Satria ny kinova fizarana ny Netrunner Core (Debian) dia tsy mitovy amin'ny fomba hafa handaminana ny fifandraisana misy eo amin'ny mpampiasa ary ny fivoarana mankany amin'ny fampidirana tonga lafatra ny programa divay sy GTK amin'ny tontolo KDE.
raha mbola Netrunner Rolling (Manjaro) araka ny anarany, dia manaraka famoahana mitohy, izay midika fa havaozina tsy tapaka amin'ny fonosana vaovao, tsy mila fanavaozana lehibe.
Netrunner dia manana programa efa voapetraka tsara sy efa voapetraka tsara, izay maneho fa tena miahy ny zava-niainan'ny mpampiasa amin'ny ankapobeny ny mpamorona.
Zava-dehibe iray hafa manan-danja amin'ity distrika Linux ity ny Izy io koa dia mizara sary ho an'ny fitaovan'ny ARM, ka amin'izao fotoana izao dia manohana an'i Pinebook sy Odroide C1 / C1 + izy io.
1 Momba ny kinova Netrunner 2019.01 vaovao
2 Sintomy ary andramo ny Netrunner 2019.01
Momba ny kinova Netrunner 2019.01 vaovao
Amin'ity famoahana vaovao an'ny Netrunner 2019.01 ity, toy ny iray amin'ireo fiasa lehibe indrindra ny fanavaozana ireo kinova amin'ireo fonosana rindrambaiko samihafa, ao anatin'izany ny KDE Plasma 5.14.3, ny KDE Frameworks 5.51, ny fampiharana KDE 18.08, ny Qt 5.11.3, ny kernel Linux 4.19, ny Firefox 64.0, ny Thunderbird 60.3, Krita 4.1.1.
Ao amin'ny Netrunner 2019.01 raha tokony ho ny fisehoseho nampiasaina taloha tamin'ny endrika Design Material, lohahevitra famolavolana vaovao "Netrunner Black" no naroso.
Ity famolavolana vaovao ity dia vonona amin'ny loko mainty, izay tsy mifanohitra amin'ny fahitana ary manolotra fanehoana an-tsokosoko kokoa ny singa interface (mampiasa ny motera lohahevitra Kvantum sy ny lohahevitra Alpha-Black).
Ho an'ireo mpankafy ny lohahevitra mahazatra dia afaka miverina haingana amin'ny lohahevitra teo aloha izy ireo.
Rehefa afindrao ny zoro ny totozy ho eo amin'ny zorony ambany ankavanana, ny fiasa hampihenana ny varavarankely misokatra rehetra dia antsoina ankehitriny mba hampisehoana birao madio;
Ny isan'ny hitsin-dàlana amin'ny tranonkala (webapps) hahazoana fidirana haingana mankamin'ny tranonkala malaza ary nanitatra ny serivisy an-tserasera. Nanampy ny fahaizana mitady tag data data amin'ny alàlan'ny interface "Alt + Space" na amin'ny alàlan'ny bara fikarohana ao anaty menio.
Ao amin'ny tranokala Firefox dia nasiana fonosana ocs-url vaovao, izay ahafahana mampiasa ny URL «ocs: //» hiditra amin'ny lahatahiry store.kde.org ary atombohy ny fametrahana ny rindranasa amin'ny alàlan'ny bokotra "Install" amin'ireo tranokala fa tsy mila fampidinana am-paosy mialoha ny fonosana.
Ao amin'ny Firefox, ny plug-in Plasma-Integration dia alefa amin'ny alàlan'ny default, izay mampiseho ny valin'ny fisintomana ao amin'ny dashboard KDE ary ahafahanao mifehy ny filalaovana ny atiny multimedia amin'ny alàlan'ny plasma KDE;
Rehefa mihazakazaka fampiharana GTK, ny fampisehoana ireo zana-baravarankely dia mitovy amin'ny fomban'ny programa KDE Plasma mahazatra;
Ao anatin'ny iray amin'ireo fikirakira fanamafisana Plasma Tweaks natambatra, mivondrona ireo maodely KCM rehetra mifandraika amin'ny fisehon'ny mpampiasa.
Sintomy ary andramo ny Netrunner 2019.01
Afaka misintona an'ity kinova fizarana vaovao ity Azonao atao ny mandeha mivantana amin'ny tranokala ofisialin'ny tetikasa izay ahitanao ny sarin'ny rafitra ao amin'ny fizarana fampidinana azy.
Raha liana amin'ny kinova famotsorana Rollig ianao. Ny rohy dia ity.
Na ny kinova miorina amin'ny Debian. Ny rohy dia ity.
Ny haben'ny sary ISO azo sintomina dia 2,8 GB. Azonao atao ny mitahiry ny sary miaraka amin'ny fanampian'i Etcher amin'ny USB.
Etsy ankilany, raha liana amin'ny fampidinana ny kinova ARM amin'ity distro ity ianao dia afaka manao azy avy amin'ity rohy ity.
Fitsinjarana feno sy noheverina tsara fa mendrika ny andramana, satria miorina amin'ny roa amin'ireo lehibe ao amin'ny Linux izy io mba hahafahan'ny mpampiasa mankafy ny rafitr'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Netrunner 2019.01 tonga miaraka amin'ny webapps sy fanavaozana bebe kokoa
Mifindra rakitra maromaro miaraka amina endrika samihafa miaraka amin'ny terminal
Deepin Linux 15.9 tonga miaraka amin'ny fanohanan'ny fihetsika sy fanavaozana haingana